योनीमा लिङ्ग अड्कीए पछि अस्पताल भर्ना…………पत्याउन नै गाह्रो !! - Ektm news
Home›स्वास्थ्य›योनीमा लिङ्ग अड्कीए पछि अस्पताल भर्ना…………पत्याउन नै गाह्रो !!
काठमाडौं-हरेक यौन जोडी आफ्नो यौन जीवनमा नयाँपन चाहान्छ नै । तर कुनै बेला नयाँपनको बहानामा यौन लिलामा मस्तराम जोडीले यस्तो हर्कत गर्न पनि पछि हट्दैनन् जसबाट उनीहरुले महगों मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । एक यौन लिलामा मस्त कामुक जोडीलाइृ पनि त्यस्तै भएको छ । उक्त जोडीले सेक्स लाइफमा नयाँ पन दिन खोज्ने क्रममा समुन्द्रमानै सेक्स गरेर जात्रा देखाएका छन् ।
दुवैजना गहिरो समुन्द्रको बिचमा सेक्स गर्न त गए तर बिडम्बना उनीहरु सेक्स गर्नु समुन्द्र मुनी डुब्नु पहिले जस्तो अवस्थामा थिए फर्किदा उनीहरुको हालत खराब भएको थियो । पानीबाट निस्कनाथ उनीहरुलाई अस्पताल भर्ना गरिएको मैटो अनलाइनले जनाएको छ । जब उनीहरुलेपोर्टो सैन जियोर्जियो बीचको भित्र आफ्नो पे्रम पानी भित्र सेक्स गर्नसुरु गरे तब ति युवाले आफ्नी पार्टनरलाई चरम सुखबाट छुटाउन खोजे तब उनीहरु समस्यामा परे ।
उनीहरुलाइृ यस्तो समस्या आयो की जब ति पुरुषले जोड लगाएर युवतीको योनीबाट आफ्नो लिगं छुटाउन खोजे तब लिगंनै निस्कीएन । दुबै जनाले चिच्याउँदै चर्को आवाजमा गुहार मागे । नजिकैकी एक महिलाले अस्पताल लैजान मदत गरिन । सेक्स पार्टनरलाई छुट्याउन गाहे भएपछि ति युवतीलाई गर्भवती महिलालाई गर्भाजेक्सन लगाएर उनको योनीबाट लिगं निकालिएको थियो श्रोत : tajapost.com
ललितपुरको सडकमा ढलको बाढी : सडकमा यसरी ...
आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर सेतीको खोचबाट महिलाको ...
उसिनेको अण्डा खानुको अचुक फाइदाहरु यस्ता छन् || अबस्य जान्नुहोला !
यस्ता व्यक्तिले भुलेर पनि नखानु होला कागति : सबैको जनकारीको लागि सेयर गरौ ..
सर्वशक्तिमान आमा ! जसले छोरालाई मृगौला दिईन्
साँच्चिकै सेक्स गरेका १२ चलचित्रहरु
यदि तपाई वा तपाईको आफन्तलाई यस्ता सकेंत वा लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पताल जानुहोस !